Voadona Mafy I Afghanistan Noho Ireo Fanafihana Roa Nahafaty Olona Tao Anatin’ny Herinandro Latsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2018 14:33 GMT
Ankizy mandositra ny toerana kendren'ireo olona mitam-piadiana ao amin'ny faritanin'i Jalalabad. Sary natolotr'i Zahra Joya. Nahazoana alalana taminy.
Nitondra vaovao mampalahelo mahazatra ho an'i Afganistana ny volana Janoary taorian'ny fanafihana roa nifanesy namely ny olom-pirenena ao amin'ny firenena Aziatika Atsimo.
Ny 24 Janoary, nanafika ny toerana misy ny fikambanana iraisam-pirenena Save the Children ao Jalalabad Afghanistan ireo lehilahy mitam-piadiana, ka namono olona telo sy nandratra olona ampolony, araka ny filazan'ny manampahefana Afghana.
Vao herinandro latsaka izany, taorian'ny fanafihana nataon'ireo milisy tao amin'ny Hotely Intercontinental tao Kabul, izay nahafatesana olona efatra farafahakeliny, manasongadina ny loza goavana iainan'ireo Afgana sy vahiny ao an-drenivohitra.
Fanafihana ny “Vonjeo ny ankizy”
Nokendren'ny fanafihana fiara voasesika tamin'ny 24 Janoary ny biraon'ny Vonjeo ny Ankizy tao Jalalabad. Taorian'ny fipoahana, nifampitifitra tamin'ireo tafika Afghana ao an-toerana nandritra ny adiny folo teo ireo jiolahy.
Nanamafy ny Vonjeo Ny Ankizy fa maty tany amin'ny faritra atsinanana ny telo tamin'ireo mpikambana ao aminy, anisan'izany ny mpiambina roa sy sivily iray. Nilaza ny mpitondratenin'ny fanjakana Afgana, Attaullah Khoygyani fa olona 20 no naratra. Namonjy olona 46 hafa ny Tafi-Piarovana Afghana, hoy izy nanampy.
Nampiato vetivety ny asany Afgàna ny fikambanana.
Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ilay antsoiny hoe fanafihana ny “andrim-panjakana Britanika sy Soedoà” ny vondrona milisy mahery setra ISIS.
Raha niteraka fahavoazana bebe kokoa ny fanafihana ny hotely Intercontinental, na ny olom-pirenena efa zatra mahita herisetra amin'ny fiainany aza mba voadòna tamin'ny fanafihana ny fikambanana mpanao asa soa ho an'ny ankizy.
Andro mampalahelo hafa ao Afghanistan, fanafihana sahisahy sy kanosa nataon'ireo vondrona mpampihorohoro tamin'ny fikambanana mpanao asa soa izay manampy ny ankizy Afgàna. Miaraka amin'ny #SaveTheChildren izahay.
Eritrereto ireo ankizy ireo.
Inona no mety ao an-tsain'izy ireo.
Oao, tena voadòna aho mahita ny fomba hanafihan'ny sasany ny foiben'ny #SaveTheChildren! Toerana izay laharam-pahamehana ny asa soa mba hanampiana ireo ankizy tsy manan-tsiny sady hoavin'ny tontolo!
Nitsoaka ireo mponina ao an-toerana taorian'ny fanafihana manao vy very ny aina tao amin'ny biraon'ny Vonjeo ny Ankizy
Nahitana ireo mpikomy mitifitra variraraka amin'ireo mponina ao amin'ny hotely mihaja ao Kabul renivohitra ny fanafihana ny Intercontinental tamin'ny 20 Janoary teo, ka olom-pirenena 25 tao an-toerana sy vahiny 15 no maty. Mahavaky fo ny kaontin'ireo tafavoaka velona.
Voalaza fa nataon'ny Taliban ny fanafihana.
Mbola mihoso-drà tamin'ny fanafihana tao Kabul #KabulAttack izahay, ankehitriny, nanafika ny fikambanana Vonjeo ny Ankizy indray ireo tafika devoly. Tsy misy fiafarana!
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, tsy nitsahatra nokendren'ireo vondrona isan-karazany izay miady amin'ny tafika Afghana natao fahirano manerana ny firenena ireo fikambanana mpanao asa soa iraisam-pirenena. Vokatr'izany, maro no nikatona na nampihena ny fisiany, ka mahatonga ireo Afghana marefo ho marefo kokoa. Tamin'ny taon-dasa, nampihena ny fisiany ny Komity Iraisam-pirenen'ny Vokovoko Mena taorian'ny nahafatesana sy nangalàna an-keriny an'ireo mpikambana maro tao aminy tany amin'ny faritra samihafa tany Afghanistan.
Efa nanafoana ireo hetsikany ny Vokovoko Mena taorian'ny fitifirana, notafihana ny MSF, manohy miala an-daharana ireo fikambanana ao Afghanistan. Mety hisy fiantraikany goavana ho an'ny Afghana mila fanampiana ireo fanafihana ireo.
Mbola tsy fantatra ny famerana ho apetraky ny Vonjeo ny Ankizy amin'ny asany amin'ny ho avy ao amin'ny firenena, saingy azo antoka fa tena ilaina ny iraka ataon'izy ireo. Heverina ho anisan'ny toerana mampidi-doza indrindra ho an'ny zaza ateraka sy mihalehibe i Afganistana, taorian'ny ady efa ho 30 taona izay nahatonga ny fahantrana sy ny herisetra.
Niasa tao Afganistana hatramin'ny taona 1976 ny Vonjeo ny Ankizy, ary mitantana programa any amin'ny faritany 16 eto amin'ny firenena izy ankehitriny. Nilaza ny fikambanana fanampiana, izay mikendry ny hampiroborobo ny fianarana tsaratsara kokoa, ny fitsaboana sy ny fanomezana fanampiana ilaina ho an'ny ankizy fa ankizy Afghana 700.000 mahery no efa nampiany nandritra ny niasany tao amin'ny firenena.